Godot 3.4 inouya nerutsigiro rweApple M1, PWA muHTML5, kuvandudzwa kweinjini nezvimwe | Linux Addicts
Godot 3.4 inouya nerutsigiro rweApple M1, PWA muHTML5, kuvandudzwa kweinjini nezvimwe
Darkcrizt | 07/11/2021 15:01 | Yakagadziridzwa ku 15/11/2021 15:03 | Zvirongwa
Mushure memwedzi mitatu yekukura kuburitswa kweiyo vhezheni itsva yemahara mutambo injini Godot 3.4 yakaziviswa, uye mune iyi vhezheni nyowani nhevedzano yekuvandudza yakaitwa, pakati payo tinogona kuwana kuvandudzwa mupepeti, rutsigiro rwakakura uye nezvimwe.
Kune avo vasina kujaira injini iyi, vanofanirwa kuzviziva Yakakodzera kugadzira 2D uye 3D mitambo. Injini inotsigira mutauro uri nyore yekudzidza kutsanangura pfungwa yemutambo, graphical nharaunda yekugadzira mitambo, imwe-tinya-kamwe mutambo deployment system, yakakura fizikisi simulation uye animation kugona, yakasanganiswa debugger, uye sisitimu yekuona mabhodhoro ekuita.
Iyo kodhi injini yemutambo, dhizaini dhizaini, uye zvine chekuita nekusimudzira maturusi (injini yefizikisi, sevha inonzwika, 2D / 3D inopa backends, nezvimwewo) zvakagoverwa pasi perezinesi kubva kuMIT.
1 Main nyowani maficha eGodot 3.4
Main nyowani maficha eGodot 3.4
Muiyi vhezheni itsva yeinjini, chimwe chezvinyowani chikuru chinomira pachena ndechekuti akawedzera rutsigiro rwe chip-based systems Apple Silicon (M1) kune iyo macOS chikuva.
Zvakare kuvandudzwa kwemupepeti kwakagadzirwa kuvandudza usability, saka yakawedzera nekukurumidza sosi yekurodha basa mune yekuongorora maitiro, kusikwa kwenodhi munzvimbo yekupokana kwawedzerwa, chimiro chitsva chekutumira matemplate chawedzerwa uye mamwe mavhisi akaitwa negizmo (inosungira bhokisi system) uye iyo animation editor yakavakirwa paBezier curves yakagadziridzwa.
Muiyo fizikisi simulation injini, kuita kwakagadziridzwa zvakanyanya yekugadzirwa kwezvinhu zveconvex kubva kumameshi uye kudhumhana kwekutevera modhi mukutarisa interface yakagadziridzwa. Painjini yefizikisi ye2D, rutsigiro rwakawedzerwa kune BVH (Bounding Volume Hierarchy) chimiro chekupatsanurwa kwenzvimbo. Iyo 3D fizikisi injini ikozvino inotsigira HeightMapShapeSW basa uye inowedzera kuwiriranisa neKinematicBody3D.
Yakawedzera rutsigiro rwekutanga kune injini yekupa kumisa kupa zvinhu zviri mukutarisa kwekamera, asi zvisingaonekwe nekuda kwekupindirana kwezvimwe zvinhu (semuenzaniso, izvo zviri kuseri kwemadziro). Bitmap overlay cropping (pixel level) inozoitwa chete mubazi reGodot 4, ukuwo Godot 3 inosanganisira dzimwe nzira dzejometri dzekudyara zvinhu zvinopindirana uye tsigiro yemaportal slabs.
Shanduko yekudzosera modhi yawedzerwa, iyo inobvumira kumisa nekukasira kuchinja kwese kwechiitiko kwakakonzerwa neiyo animation application kuburikidza neAnimationPlayer, pane kudzima shanduko yechinhu chimwe nechimwe.
Sarudzo yakawedzerwa kune zvigadziriso kuti ichinje zoom level ye2D maonero, ayo, semuenzaniso, anogona kushandiswa kuwedzera kana kuderedza 2D zvinhu, zvisinei nezvino kutambanudza modhi.
Zvedzimwe shanduko izvondinomira kunze kweiyi vhezheni itsva:
Iyo Files API yakawedzera kugona kushanda nemafaira (kusanganisira PCK) akakura kupfuura 2GB.
Shanduko dzakaitwa kuvandudza kupa kutsetseka nekuverenga shanduko yefuremu pasina kusungirirwa kune system timer uye kugadzirisa nyaya neinobuda nguva kana uchishandisa vsync.
Rutsigiro rwakawedzerwa kuInputEvents yekuisa yekuisa system yekubatanidza scan code dzinoratidza nzvimbo chaiyo yemakiyi pakhibhodi, zvisinei neiyo inoshanda marongero.
AESContext uye HMACContext interfaces yakawedzerwa kuti iwane AES-ECB, AES-CBC uye HMAC encryption algorithms kubva muzvinyorwa. Zvakare yakawedzera kugona kuchengetedza uye kuverenga yeruzhinji RSA makiyi kugadzira uye kuona masiginecha edhijitari.
Nzira itsva ye toning, ACES Fitted, yakawedzerwa iyo inobvumira hukuru hwechokwadi uye kunyatsojeka kwemuviri nekuwedzera kusiyana kwezvinhu zvakajeka.
Yakawedzerwa tsigiro ye hollow silinda kana mhete yakaumbwa 3D particle emission shape.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Godot 3.4 inouya nerutsigiro rweApple M1, PWA muHTML5, kuvandudzwa kweinjini nezvimwe